Serivisy fandefasana bobongolo maharitra maharitra - OEM China bobongolo maharitra maharitra mpanamboatra sy orinasa - Casting Minghe
Inona no atao hoe Casting bobongolo maharitra
Ny Casting Mouldman maharitra dia dingana fanariana vy izay mampiasa bobongolo azo ampiasaina (antsoina hoe "lasitra maharitra", vita amin'ny metaly). Ny fampiasana hery misintona hamenoana ny bobongolo no fomba mahazatra indrindra, antsoina hoe fanariana gravitasi, fa misy koa ny fizotrany mampiasa tsindry rivotra na banga. Misy ihany koa ny fiovan'ny gravity casting, antsoina hoe fomba fanariana bitumen, izay ampiasaina hamokarana casting lavaka. Ny metaly fanariana mahazatra ampiasaina matetika dia misy alimo aluminium, manezioma ary varahina. Ny fitaovana hafa toy ny firaka, ny zinc ary ny firaka, ary koa ny vy sy vy dia hatsipy amin'ny alàlan'ny bobongolo grafita.
Ny casting casting maharitra dia antsoina koa hoe Casting Type Metal. Izy io dia fomba fanariana izay arotsaka ao anaty lasitra metaly ny metaly ranoka mba hahazoana fitaratra. Ny lasitra dia vita amin'ny vy ary azo ampiasaina matetika (an-jatony hatramin'ny in'arivony). Ny casting izay azo vokarina amin'ny fanariana bobongolo vy dia misy fetra voafetra amin'ny lanjany sy ny endriny. Ohatra, ny metaly ferrous dia mety ho casting amin'ny endrika tsotra fotsiny; ny lanjan'ny casting dia tsy mety ho lehibe loatra; voafetra ihany koa ny hatevin'ny rindrina, ary ny hatevin'ny rindrin'ny fametahana kely kokoa Tsy afaka atsipy
Amin'ny fampiharana isan-karazany izay mitaky famokarana marobe na tetikasa famerenam-bidy dia ilaina ny fanariana bobongolo maharitra. Amin'ity dingana ity, preheated ny bobongolo. Ity dingana ity dia manaisotra ny hamandoana mety misy ao anaty lasitra, ary manakana ny metaly metaly tsy hihena haingana loatra. Ny fanafoanana ny lasitra maharitra dia mety hisorohana ny fahasimban'ny lasitra noho ny fanitarana hafanana rehefa ampidirina ao anaty lasitra ny metaly metaly. Ny fomba mahazatra indrindra dia ny fampiasana hery misintona handrotsahana tsotra fotsiny ny metaly ranoka ao anaty lasitra nafanaina. Ity fomba ity no fomba farany ambany amin'ny fandefasana lasitra maharitra satria tsy mila fitaovana firy izy io, saingy tsy mety amin'ny toe-javatra mety tsy hahatratra ny faritra rehetra amin'ny bobongolo ny metaly metaly. Raha ny bobongolo maharitra miaraka amin'ny antsipiriany izay tsy maintsy feno metaly metaly, mety hilaina ny banga na tsindry hanampy amin'ny fampidirana vy. Raha ny bobongolo maharitra manampy ny tsindry, ny tsindry ambany dia ampiasaina hanerena ny metaly anidina ho ao anaty lasitra hanariana. Ho an'ny fanariana bobongolo maharitra manampy volo, ny rivotra dia alaina avy amin'ny bobongolo mba hananganana fantsona ambany tsindry, manintona ny metaly ao anaty lasitra. Amin'ireo tranga roa ireo, ny fanerena dia hahatonga ny vy metaly hameno ny toerana kely sy ny antsipiriany kely, raha tsy izany dia mety hanimba ny fanariana azy. Ny fiovana iray hafa amin'ny fizotran'ny fanariana lasitra vy dia ny fomba fanariana fotaka. Amin'ity fomba ity, ny metaly anidina dia araraka anaty lasitra ary manamafy manodidina ny sisin'ny akorandriaka. Raha vantany vao manomboka mihamafy ny vy metaly, dia haidina ny metaly misy ranoka ao afovoany, ary mamela fantsom-baravarana mety hatao haingo sy vokatra haingon-trano.
Minghe dia mpamatsy serivisy Casting maharitra maharitra za-draharaha, mpanamboatra, mpanondrana any Shina, dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanomezana serivisy fanodinana OEM maharitra maharitra tsara ho an'ny faritra metaly mora vidy ambany na singa miaraka amina fiasan'ny faritry ny fanjakana mahavariana. milina fanariana zavakanto, toy ny kodiarana, splines, rims, boaty fanamoriana, fittings fantsom-batana, trano fonenana fampidirana solika, ary pistonan'ny motera fiara sns. vy vy, aliminioma ary titanium. Azontsika atao foana ny misafidy fomba fanariana vy mety hahatratra ny takinao. Ny serivisy fanodinana bobongolo maharitra maharitra dia miantoka ny fahazoan'ny mpanjifanay ny ampahany farany avo lenta. Alefaso haingana ny fanontanianao na ny sary mba hahazoanao teny nateraka an-tserasera.
Ny tombony sy ny fatiantoka ny fanariana bobongolo maharitra
Fampitahana ny fanariana bobongolo maharitra sy ny fanariana fasika: Betsaka ny tombony azo amin'ny teknolojia sy ny toekarena.
- Ny fanariana vy dia manana toetra mekanika avo kokoa noho ny fanariana fasika. Ho an'io firaka io ihany, ny tanjaka ampiasainy dia azo ampitomboina manodidina ny 25% eo ho eo, ny tanjaky ny vokatra dia azo ampitomboina manodidina ny 20% eo ho eo, ary ny fanoherana ny harafesina sy ny hamafin'izy ireo dia nohatsaraina koa;
- Ny famaritana marina sy ambonin'ireo fanoratana dia avo kokoa noho ny fanariana fasika, ary milamina ny kalitao sy ny habeny;
- Avo ny vokatra azo avy amin'ny casting, ary mihena ny fanjifana vy metaly, amin'ny ankapobeny dia mitahiry 15-30%;
- Tsy misy fasika na fasika latsaka no ampiasaina, amin'ny ankapobeny 80-100% amin'ireo akora maodely azo vonjy;
Ankoatr'izay, ny Casting maharitra maharitra dia manana fahombiazana avo lenta; mampihena ny antony mahatonga ny lesoka; Tsotra ny fizotrany, ary mora ny mahatsapa mekanisation sy mandeha ho azy. Na dia manana tombony maro aza ny Casting maharitra maharitra dia manana fatiantoka ihany koa izy. Toy ny:
- lafo ny vidin'ny fanamboarana lasitra vy;
- Ny karazana metaly dia tsy zakan'ny rivotra ary tsy misy fihemorana, izay mora miteraka takaitra toy ny tsy fahampian'ny fandrarahana, ny vaky na ny vava fotsy an'ny vy natsipy;
- Amin'ny casting maharitra bobongolo maharitra, ny mari-pana miasa amin'ny bobongolo, ny mari-pana miraraka ary ny hafainganan'ny firaka, ny fotoana hijanonan'ny fanariana ao anaty lasitra, ary ny sarona ampiasaina dia tena mora tohina amin'ny kalitaon'ny fanariana ary mila fehezina mafy .
Noho izany, rehefa manapa-kevitra ny handray ny Casting maharitra ho an'ny bobongolo, ireto antony manaraka ireto dia tsy maintsy dinihina amin'ny ankapobeny: ny endrika sy ny lanjan'ilay fanariana dia tokony ho mety; tsy maintsy misy andiany ampy; avela ny fe-potoana farany hanaovana ny asa famokarana.
Ny mampiavaka ny famolavolana bobongolo maharitra
Ny lasitra metaly sy ny bobongolo fasika dia misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fampisehoana. Ohatra, ny bobongolo fasika dia manana permeability rivotra, fa ny lasitra vy kosa tsy; ny lasitra fasika dia tsy mahay mitondra hafahafa, ny lasitra vy dia manana fitondran-tena tsara, ny bobongolo fasika kosa mihemotra, fa ny lasitra metaly kosa tsy manana. Ireo toetra mampiavaka ny lasitra vy ireo dia mamaritra fa manana ny fitsipiny manokana izy amin'ny famolavolana ny fanariana.
Ny fitaoman'ny fiovan'ny toetran'ny entona ao amin'ny lavaka amin'ny famolavolana ny fanariana: Rehefa feno ny metaly dia tsy maintsy esorina haingana ny gazy ao anaty lavaka, fa ny metaly kosa dia tsy mahazaka entona. Raha mbola atao ambanin-javatra ny fizotrany dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny casting. .
Ny toetra mampiavaka ny fifanakalozana hafanana mandritra ny fanamafisana ny fanariana: rehefa tafiditra ao anaty lavaka ny metaly metaly dia mamindra ny hafanana amin'ny rindrina vy. Ny metaly mamoaka rano dia mamoy ny hafanana amin'ny rindrin'ny bobongolo, manamafy sy mihena, raha mahazo hafanana kosa ny rindrina bobongolo, mampitombo ny mari-pana ary mivelatra miaraka amin'izay. Vokatr'izany dia misy "banga" miforona eo anelanelan'ny fanariana sy ny rindrin'ny bobongolo. Alohan'ny hahatratra ny maripana mitovy ny rafitra "bobongolo-banga-metaly", ny casting dia azo raisina ho fampangatsiahana ao amin'ny "banga", raha ny rindrina lasitra metaly kosa nofanaina amin'ny "banga".
Ny bobongolo vy dia manakana ny fiantraikan'ny fihenan'ny casting: ny bobongolo vy na ny metaly dia tsy misy fihemorana mandritra ny fizotran'ny fanamafisam-peo ary manakana ny fihenan'ny casting. Ity dia singa iray hafa an'io
Karazan-tsarimihetsika famokarana karazany samihafa amin'ny famolavolana bobongolo maharitra
Fomba fanariana bobongolo maharitra (1)▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (2)▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (3)▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (4)▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (5)▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (6)▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (7) ▶
Fomba fanariana bobongolo maharitra (8)▶
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fanariana bobongolo maharitra
Safidio ny mpamatsy bobongolo maharitra maharitra tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny famolavolana bobongolo maharitra dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, Fanjakana Mitambatra, Alemana, Frantsa, Afrika atsimo, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy famolavolana bobongolo maharitra maharitra mahazatra dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana lasitra maharitra anao.